ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: January 2011
တခါတခါသွားတတ်တဲ့ FACE SPA နေရာလေးရှိတယ်။ ဆိုင်ရှင်ကလည်း ရွယ်တူလောက်ပဲရှိအုန်းမယ်။ သူ့ အိမ်မှာ ဖွင့်ထားတာ။ အိမ်ဆိုင်လေးတွေက သာမန်ဆိုင်တွေ ထက်နည်းနည်းဈေးများပေမယ့် နာမည်ကြီးဆိုင်ကောင်းကြီးတွေ လိုလည်းပေးရတာ မများဘူး။ ကြိုတင်ဘိုကင်တော့လုပ်ရတယ်။ သူ့ အချိန်နဲ့သူကွက်တိပေါ့။ အဲ့ဒီတော့ဘာအားသာချက်ရှိလည်းဆိုတော့သူရဲ့ ဆိုင်လည်းလူမ၇ှုပ်တော့ဘူး။ကာစတန်မာ ကိုယ်တိုင်လည်း အေးအေးဆေးဆေး တစ်ယောက်တည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖြစ်ချင်တာကိုယ်ပြောလို့ ရတယ်။ အခန်းသီးသန့်မှာ ကာစတန်မှာတစ်ယောက်စာအတွက်ပဲ နေရာကိုလုပ်ထားတော့ အတော်ကို နေရာကျယ်သလိုပဲ။ အိမ်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက် သန့် ရှင်းရေးကအစ ပိုတာဝန်ကြီးတယ်တဲ့။ သူယူလိုက်တဲ့ငွေနဲ့ တန်အောင် ဆားဗစ်ကိုသူပြန်ပေးရမယ်။ ဆိုင်နေရာ မလို ၀န်ထမ်းမလိုတဲ့ အတွက် ဈေးက အပြင်ထက်သက်သာတယ်။ မဆိုးဘူးဒီအိုင်ဒီယာ။
နောက်တစ်ခုက သွားနေကြ ဆံပင်ဆိုင်လည်းအဲ့လိုပဲ။ အရင်ကတော့နာမည်ကြီးဆိုင်မှာ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတယ်။ ခု အိမ်ထောင်ကျတော့ သူ့ အမျိုးသားနောက်လိုက်လာပီး သူ့ အိမ်အောက်ထပ်မှာပဲဆိုင်ဖွင့်တယ်။ ပစ္စည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ သန့်ရှင်းရေးလည်းသူ အကုန်လုံးသူပဲ သူလည်းဘိုကင်က အမြဲထပ်နေတယ်။၀င်ငွေအတော်ကောင်းတယ်လို့ သိရတယ်။
မနေ့ က ကျောင်းကအပြန် ခြံလေးတစ်ခြံထဲမှာ လက်သည်းခြေသည်းအလှပြင်ဆိုင်လေး ကြော်ငြာထားတယ်။ သူလည်းသေချာတယ် ဘိုကင်ကြိုယူရမယ့်သဘော။
တလောက အလည်သွားတဲ့နေရာက အိမ်ထမင်းဆိုင် အိုင်ဒီယာလေးကြိုက်တယ်။ တနေ့ကို ၂ တွဲပဲလက်ခံတယ်။ အိမ်ရဲ့အောက်ထပ်မှာ လုပ်ထားတယ်။ဆိုင်လို့ နာမည်မတပ်ထားဘူး ဘိုကင်လိုအပ်တယ်။ ဆိုင်ပုံစံမဟုတ်ပဲ အိမ်ထမင်းဟင်းပုံစံကို ကိုယ့်အိမ်အတိုင်းလုပ်ပေးထားတယ်။
စားပွဲထိုးမ၇ှိဘူး။စားခါနီးမှလာ တခါတည်းပူပူနွေးနွေး အဆင်သင့် ရေနွေးကြမ်းထည့်ပေးတဲ့အချိန်ကလွဲလို
အိမ်ရှင်ကထွက်မလာဘူး..အံမယ် အဲ့မှာလည်း ဘိုကင်က အပြည့်..။
မြန်မာပြည်မှာ အိမ်ဆိုင်အလှပြင်ဆိုင် (သို့) အခြားသော လုပ်ငန်းလုပ်ကြသည်ဆိုပါဆို့ဘာလို့ မပေါက်လည်း
တို့ မြန်မာတွေ က ဆိုင်ကြီးတွေကိုသာ ဘိုကင်လုပ်. ဆေးခန်းလောက်သာဘိုကင်လုပ်ချင်တာ
ကိုယ်တိုင်အပါအ၀င် သွားချင်ရင်ချက်ချင်းသွားလိုက်တာပဲမို့ လား။ နောက်တစ်ခုက အိမ်ဆိုင်တွေက အိမ်မှာဆိုပီး ဈေးတော့ သက်သာပါရဲ့ သန့် ရှင်းရေးအားသာမှု့ . ပရိုက်ဗိတ်စီဆိုတာတွေ ကို ထည့်မစဉ်းစားကြသေးဘူး ။ဒီမှာက ဆိုင်နဲ့ အိမ်ဆိုတာပဲ ကွာတယ်။ အိမ်ဆိုင်က ပိုပီးသန့် ရှင်း မှု့မှာပိုသာတယ်။
တိုကျိုက ၇ှင်းအိုကုဘိုက ယိုးဒယားဆိုင်မှာမြန်မာတွေ အထိုင်များတယ်။
ဆိုင်ဝန်ထမ်းက ၀န်ထမ်းဝတ်စုံနဲ့ ချက်နေတဲ့ယိုးဒယားကြီးက Chef ၀တ်စုံနဲ့ မိသားစုဆိုင်လို မျိုးပေမယ့်စားပွဲထိုးကလည်းစားပွဲထိုးဝတ်စုံဝတ်ထားတယ်။ မီးဖိုချောင်သန့် သန့်ကိုလည်း လှမ်းပြီးမြင်နေရတယ်။ ရောင်းလိုက်ရတာလည်း အုန်းအုန်းကိုထနေတာပဲ။
သွားနေကြမြန်မာဆိုင်သွားတယ်။ ဆိုင်၇ှင်အမကြီး ဆွယ်တာအနီနဲ့ ဆံပင် စည်းပီးဟင်းချက်နေတယ်။ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ငရုတ်သီးပုလင်း ၊ဆီပုလင်း ၊အိုးတွေက မဲနေတယ်။ ဟင်းချက်နေတဲ့ နောက်စားဖိုမှုးက စွပ်ကျယ်လက်တိုရယ် ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ချက်နေရင်း ထွက်လာပီး ရန်ကုန်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာတွေ့ ရတဲ့ ဓတ်ဘူးအနီေ၇ာင်အကွက်လိုလိုတွေ(သိမှာပေါ့)
ထဲကနေေ၇နွေးကြမ်းလာထည့်ပေးတယ်။ ဈေးကြီးလို့ လို မပြောနဲ့ ဂျပန်က used ဆိုင်တွေ မှာ
ကုန်တိုက်ကနေ လှည့်ဝင်တဲ့ ပစ္စည်းအသစ် ဈေးသက်သက်သာသာတွေ တပုံကြီး။
အဲ့ဆိုင်က လူတွေက ဂျပန်ရောက်တာမနေ့ တနေ့ က လူတွေ မဟုတ် မ၇ှိဘူးဆို အနှစ် ၃၀လောက်နားနီးပီ..
ထွက်လာပီးစကားပြောလိုက် ပြန်ဝင်ချက်လိုက် ဟင်းခွက်လာချလိုက်။ ပေးရတဲ့ဈေးကလည်းဂျပန်ဆိုင်တွေနဲ့ တန်းတူ တခါတခါ ပိုတောင်များတယ်။
မြန်မာစိတ်လို့ တော့မပြောနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်နေတာလေ။ တစ်ခါတစ်ခါ ဆရာသမားတွေကို မြန်မာအစားအစာဆိုပီးဧည့်ခံဖို့ ခေါ်သွားလို့ ရမယ့်ဆိုင်က နည်းလွန်းတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာဆိုင် မြန်မာအစားအစာဟာ မြန်မာလူမျိုးညဘက် ကာ၇ာအိုကေ လာဆိုဖို့ လောက်ပဲ အဆင့်က ရှိသေးတယ်။ မသွားချင်မသွားနဲ့ ပေါ့လို့ တော့ အလွယ်မပြောပါနဲ့ ကွယ်။ အားပေးချင်တဲ့စိတ်တစ်ဝက် စားချင်တဲ့စိတ်တစ်ဝက်နဲ့ သွားနေကြကိုး။။။
ရန်ကုန်မှာဘ၀ရပ်တည်ဖို့ အတွက် တင်္နလာကနေသောကြာ အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ ဘ၀၇ှင်သန်ဖို့ အတွက်တော့ စနေတနင်္ဂတွေဆို အပင်တွေစိုက်ပါတယ်။ မြစ်ကြီးနားက ပန်းဥပင်(ထောင်းစားရန်)
ကနေစလို့မုံရွာ ဘက်က ဆူးပုတ် ကစ စိုက်ထားပါတယ်(ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ စိုက်ပျိုးရေးသမားပါ)။ (ပြောစရာဆိုလို့ ) တီကောင်တို့ မျှော့တို့ ကျွတ်တို့ တော့ သေမတတ်ကြောက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်ပြန်ရင် ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးထားတဲ့အသီးအရွက်တွေနဲ့ အလုပ်အားရက်တွေမှာ အဲ့လို အိမ်ထမင်းဆိုင်လေးတော့ ဖွင့်ချင်သား။ ဘိုကင်ကိုတော့ အွန်လိုင်းကနေ လှမ်းယူထားကြပေါ့ ဘယ်လိုလည်း။
နံနံပင်ကအဲ့လောက် ဆိုရင်ဂျပန်မှာယန်း ၂၀၀လောက်ပေးရတယ်။ပီးတော့လိုသလောက်လည်းမရဘူး။
ပူစီနံကတော့ ၁၅ရွက်လောက်ဆိုရင် ယန်း၂၀၀။ ပူစီနံက မာလီဘူးမိုဟိတို အတွက် ထားတာ.။ ကိုယ့်ပူစီနံကသူငယ်ချင်းပေါင်းစုံအတွက် ပျိုးပေးရတာလက်မလည်ဘူး။
Posted by ကြည်ကြည် at 11:16 PM 8 comments:
သတိရလို့ ဆိုတဲ့ မက်ဆေခ်ျ့ တစ်ကြောင်း
3D နဲ့ ပြောင်းကြည့်
ပုလဲလုံးဖြစ်ဖို့ ကမာတစ်ကောင် ထုဆစ်နေတယ်။
Touch screen ကို လက်တင်ဖို့ ပြင်တိုင်း
အဲ့လို စာကြောင်းတွေ စီကာရိုက်ေ၇းပေမယ့်
Screen ပေါ်က ဗလာ word တစ်အုပ် သိမ်းထုတ်ရတာလည်း ညစဉ်
လှိုင်းခတ်သံလည်းကြားတယ် Vanda Miss Jaoquim နံလည်း သင်းတယ်..
စကားသား ကျောက်ဆောင်နဲ့ တိုက်မိလိုက်တယ်။
ယိမ်းနွဲ့ပန်းခင်း လေပြေညှင်း
ဧ၀ဆိုသူတဲ့ ခေါင်းရမ်းရင်း စာတစ်စောင်အရင် ကမ်းတယ်။
Vanda Miss Jaoquim ( National Flower of XXXXXXXX)
ရေးသူနဲ့ သူရေးတဲ့စာ တစ်ခါတစ်လေ ထပ်တူမကျတတ်ပါဘူး....
Posted by ကြည်ကြည် at 1:22 AM4comments:
Posted by ကြည်ကြည် at 12:23 AM 12 comments:
စီးပွားရေးကျပ်တည်းနေကြတဲ့ ယခုခေတ်မှာ သူထက်ငါအပြိုင် ဘယ်လို ထိုးဖောက်ရမလည်းဆိုတာ
ပြင်ကြဆင်ကြ ပလန်တွေဆွဲကြ ပုံစံအသစ်တွေ ချကြ
အဲ့ထဲမှာ တစ်လောကကြည့်လိုက်ရတာလေးက အတော် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်။
တိုကျိုမြို့ ရဲ့ မြို့လယ် ရှင်းဂျူကုလမ်းပေါ်မှာဖွင့်တဲ့ဆိုင် အကြောင်း
ခုခေတ်မှာ ဆိုင်တွေတော်တော်များများမှာ NO smoking နဲ့ smoking area ဆိုပီး နေရာခွဲထားကြတယ်မို့ လား။
ဘယ်လောက်ပဲခွဲခွဲ ဆိုင်ထဲဝင်ရင်တော့ အနံအသက်ကရှိတာပဲ။ အဲ့လိုခေတ်ကြီးမှာ အဲ့ဆိုင်က ပြောင်းပြန်ပြန်လုပ်လိုက်တယ်။.. ကျွန်တော်များဆိုင်သည် ဆေးလိပ်ချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက် သီးသန့်ပြုလုပ်ထားပါသောကြောင့် ခလေးသူငယ်များဖြင့် လာရောက်ခြင်း သည်းခံပေးပါတဲ့။
သူများနဲ့ပြောင်းပြန်တော့ လုပ်လိုက်တာပဲ တနေ့ကိုဆိုင်ကို လူအယောက် ၇၀၀ ၀င်တယ်တဲ့ ကဲလူတစ်ယောက်ကို ယန်း ၈၀၀နဲ့ ပဲ တွက်လိုက်နော်။ အိုင်ဒီယာ….
ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ မိန်းကလေးတိုင်းလိုလိုသိတဲ့ ဂျပန်မိတ် TRIUMPH နာမည်ကြီး အတွင်းပစ္စည်း
တံဆိပ် . သူ့ ပစ္စည်းတွေ ပိုရောင်းရတဲ့ ပလန်တစ်ခုချလိုက်တယ်အွန်လိုင်းကနေရောင်းတဲ့ဆိုက်မှာ
အောက်ပါ ၀တ်စုံ sale campaign သီးသန့်လုပ်ပေးထားတာ။
သီးသန့် ထုတ်ကုန်ရဲ့ အောက်မှာ လင့်တစ်ခုထည့်ထားတယ်။ ၀င်ကြည့်တဲ့မိန်းကလေးက သူ လိုချင်တာလေးကို ကလစ်ပီး ရင် သူပို့ ချင်တဲ့မေလ်းလိပ်စာကို ရိုက်ထည့်လိုက်
ပြောရရင်တော့……..အချစ်ရေ …..ဒါလေးနဲ့ ဆို ဘယ်လို နေမလည်းဆိုပီးပေါ့
ကိုယ်ဝယ်ခိုင်းစေချင်တဲ့ သူဆီ (ချစ်သူ) ရဲ့မေးလ်းထဲကို လှမ်းပီးပို့ ယုံပါ
အပြင်မှာ အင်တာဗျူးတော့ အတော်များများသော ပုရိသတွေက အဲ့ဒီ ဆိုက်ရဲ့ပလန်ကိုကြိုက်ကြောင်း ကိုယ့်မိန်းခလေးကို လက်ဆောင်ဝယ်ပေးချင်ရင်တောင် အရောင် အကြိုက်မသိတော့ ခုဒီဆိုက်ကလေးရှိတော့ လက်ဆောင်အတွက် ခေါင်းမစားပါတဲ့..။.
အဲ့လို လုပ်လိုက်တာ ၉၇% နှုန်းအောင်မြင်မှု့ ရှိကြောင်းနဲ့ ရောင်းအားမြင့်တတ်လာပါတယ်တဲ့ ..
တစ်လောက ကမာကုရ သွားတော့ ကမာကုရ ကမ်းခြေက ဟာဝိုင်ယီဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ သူတို့ က ရင် ၀တ်တဲ့အင်္ကျီကြည့်ပီး ဟာ…..ဟုတ်တယ် ငါ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင် သင်္ကြန်အမှီ ဒီပစ္စည်းထုတ်မယ်လို့ ....အုန်းသီးလည်းပေါတာပဲ ဟာ...
Posted by ကြည်ကြည် at 1:30 AM 10 comments:
Posted by ကြည်ကြည် at 10:16 AM4comments:
မနေ့ညက အိမ်ကိုမိုးကြီးချုပ်မှဖုန်းဆက်တော့ မေမေတစ်ယောက်စိတ်ပူသွားတဲ့ပုံ မေမေရေ ခုမှစာစလုပ်မှာ မနက်မနိုးမှာဆိုးလို့ ခုလှမ်းပီး ဘတ်ဒေးလှမ်းနှုတ်ဆက်တာဆိုမှ ရီမောနိုင်တယ်။
ဟက်ပီဘက်ဒေး ဘယ်နနှစ်လည်းမေမေ လို့ မေးလိုက်တော့ ၅၆ တဲ့ တစ်နှစ်လျှော့ပြောတယ်။
ကျွန်မလိုပဲ။ ဒီညမိသားစုတွေ အပြင်ထွက်စားကြလိမ့်မယ်။ မြေးတွေနဲ့ ဝိုင်းပြီးကိတ်မုန့် ကိုခွဲလိမ့်မယ်။မနက်စောစောဘုန်းကြီးကျောင်းကိုဆွမ်းချိုင့် ပို့ ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်။
သူ့ နယ်ကဘုန်းကြီးကျောင်း သို့  မိဘမဲ့ဂေဟာသို့တစ်ခုခုလှူလိမ့်မယ်။ ဒါကမေမေလုပ်နေကြ။
၁၀တန်းမအောင်ခဲ့တဲ့မေမေက လုပ်ငန်းခွင်ကိုဝင်ခဲ့ပြီး သူ့အောက်က အငယ်တွေကို ကျောင်းထား ပေးခဲ့တယ် ။
မောင်နှမတွေအတွက်လည်း အမကြီးအမိရာ အနှစ်နာခံခဲ့သလိုပဲ သမီးတွေအတွက်လည်း မေမေဟာ အေးချမ်းတဲ့ ရီစရာကောင်းတဲ့ ချစ်ဖို့ ကောင်းတာကတော့ပြောမနေနဲ့ပဲမေမေ၊ ဖေဖေ့အတွက်လည်း
အလိုက်သိ အေးချမ်း ဘာမှမပူဆာတဲ့ မေမေဖြစ်ခဲ့တယ်။ ခုလည်း သားသမီးတွင်မဟုတ်တော့ဘူး မြေးတွေအတွက်ပါ ပေးဆပ်နိုင်လွန်းတဲ့ မေမေကိုစာနဲ့ မှတ်တမ်းတင်လိုက်တာ ဘ၀မှာပထမဆုံးပဲ။ ဘလော့သာမရေးခဲံ့ရင် မေမေ့အကြောင်းက ညီအစ်မနှစ်ယောက်ရဲ့ စကားဝိုင်းမှာအမှတ်ရစရာ အနေနဲ့ ပဲ ဖြစ်နေမှာ။ ရန်ကုန်ပြန်ရင်ဒီစာကိုတော့ ပေးဖတ်ရမယ်။ရိုးလွန်းတဲ့မေမေ တစ်ခါတစ်လေ ရီစရာလေးတွေ က များသား။ ကျွန်မတို့ က အရင်က နယ်မှာနေခဲ့တာ နောက်တော့ရန်ကုန်ကိုပြောင်းတယ်။ရောက်ခါစ ၁ နှစ်ကျော်ကျော်က အတော်ကိုနေသားမကျဘူး.။ မေမေ သေချာစုဆောင်းထားတာလေးတွေ ပလုံကနဲ မြည်သွားတဲ့ ကိစ္စလေးတွေ ဖြစ်လာ မေမေ က သမီးတွေကိုတော့ မျက်နှာမငယ်စေရဘူး။ မေမေက သမီးတွေအပြင် သမီးတွေရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ အတော်ချစ်တတ်တယ်။ အိမ်ကိုအမြဲ လာလည်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းအတွဲ တစ်တွဲ ရှိတယ်။ ကျွန်မထက်၅ နှစ်နီးပါးကြီးကြတယ်။
အိမ်ကိုလိုက်လိုက်လာပြီးရင် အဲ့နှစ်ယောက်က မေမေ စိုက်ထားတဲ့ ပန်းရုံတွေ ဘေးမှာ ထိုင်ပီး ကြည်ကြည်နူးနူးနေလိုက် ကောင်မလေး ထမင်းချိုင့်ဖွင့်စားရင်းမေမေချက်ထားတာလေးတွေစားရင်းပေါ့။ ကျွန်မက အဲ့အချိန်မှာ ၁၈,၁၉ ပေါ့ မေမေက သမီးရေ ရီးစားရှိပီလားတဲ့ အာမေမေကလည်း မရှိသေးပါဘူး ဆိုတော့ အင်း ၂၂ နှစ်မှ ထားနော်တဲ့။ ဘာလို့၂၂ နှစ်လို့ ပြောလည်းတော့ လည်းမသိဘူး။ဒါပေမယ့်
နောက်ပိုင်းကျွန်မ အလုပ်သွားရင် တမင်းချိုင့်ထဲမှာ ဟင်းတွေ က များများနေတယ် နောက်တော့ မေမေရယ် ဟင်းတွေ များကြီးမထည့်နဲ့ နော် လို့ သတိပေးတော့ နောက်မှ ပြောပြတာ သမီးများရီးစားတွေ ဘာတွေနဲ့ ထမင်းအတူတူစားလို့ ဟိုကောင်မလေးလို သူ့ ထမင်းဘူး တူတူမျှစားရင်
ငါ့သမီးမ၀ မှာဆိုးလို့တဲ့ ကဲကြည့် မေမေတို့ များရီးစားမထားနဲ့ လည်းပြောသေး သူကပဲစပီးဟင်းတွေ ပိုထည့်ပေးနဲ့ ။
နောက် ကျွန်မပထမတစ်ခါ ကျောင်းလာတတ်တော့ မေမေ အမြဲ သတိပေးတာက မြန်မာလူမျိုးပဲ ကြိုက်ဖို့။
မေမေ သမီး၂၂ လောက်မှ ထားမှာပါ၊ထားရင်လည်းမေမေ့ ကို အသိပေးမယ်ဆိုမှ သူကျေနပ်ရှာတယ်။
မြန်မာပြည်ကို ခဏပြန်ဖို့ အကြောင်းပေါ်လာရော အဲ့မှာပဲ တူတူနေတဲ့ စီနီယာမိသားစု က ဒီမှာမွေးတဲ့
သူ့ ခလေးကို လူကြုံထည့်မယ်ပေါ့ မေမေကိုပြောပြတော့ သမီး လေယဉ်ပေါ်က ခလေးပိုက်ပြီးဆင်းလာရင်
သမီးဖေဖေတော့ လန့်မှာသေချာတယ်။ သမီးကြီး ဂျပန်ယူပြီး ကြည့်စမ်းခလေးပါ ပါလာသလားပေါ့.။ ဖေဖေနဲ့ မေမေက ကျွန်မ လူမျိုးခြားနဲ့ ယူမှာ သိပ်ကြောက်တာ။
သမီးကြီး လူမျိုးခြားယူရင်တော့ ဆိုပီး အိမ်မှာ ပူတတ်တယ်တဲ့ ညီမလေးက အော် မေမေရယ် ဘာဖြစ်လည်းလို့ ပြောတော့ မေမေကလေ မေမေ့မြေးကို အိုအိုးးအို ဘွားမြေးရယ်
မငိုပါနဲ့လို့ ချော့ချင်တာအို အိုအို
don’t cry baby လို့ တော့ချော့ ချင်ပေါင်ဆိုလို့အားလုံးဝိုင်းရီလို့ စိတ်ဆိုးဆိုသေး။
နောက်ကျောင်းပီးလို့ ဒီမှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ သမီးကြီးရယ် ပြန်လာပါလားတ။ဲ့ မေမေရယ် ဂျပန်လစာနဲ့ရန်ကုန်မှာနေရရင် ကောင်းမယ်လို့ြေ့ပာမှိလိုက်တော့ ရစေချင်တယ် မေမေလည်း
ဆုတောင်းပေးပါ့မယ်ပေါ့။ ဟယ်မကြာဘူး ဒီက ကုမဏီ က ရန်ကုန်မှာရုံးခွဲ ဖွင့်ရော ကဲ တစ်လကို ၈၀၀ နဲ့တစ်ဒေါ်လာ ၃၀၀ ခေတ်မှာ ရတယ။် ကိုယ့်ထက်မေမေက ၀မ်းသာတယ်။
မေမေရင်ခွင်မှာ မေမေကျွေးတာစားပီး သမီးအသားတင် အဲ့လောက်ရတာ မကိုက်ဘူးလားတဲ့ ပြုံးပြီးပြောတယ်။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဘ၀နဲ့ ဒီမှာအများနည်းတူနေမယ်ဆိုရင် ၀န်ထမ်းငယ်ဘ၀မှာ တစ်လ၈၀၀ စုနိုင်ဖို့ မလွယ်။ မေမေ့မေတ္တာက အစွမ်းထက်လွန်းလှတယ်။
ညီအစ်မတွေ အ်ိမ်ထောင်ကျတော့ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ညီမနှစ်ယောက်က အိမ်သာခွဲသွားကြတာ။ ညနေတိုင်းမေမေအိမ်မှာဆုံကြတယ်။ ထမင်းဝိုင်းမှာ အမြဲ နောက်တတ်တာက သက်သာအောင်
ယေကျာ်းပေးစားလိုက်ပါတယ။် ခု ၂ ယောက်ပိုတိုးလာတယ်လို့ စတတ်သေးတာ။
နောက် ဖေဖေကစွံတဲ့ အကြောင်းပြောရင်း မေမေနော်လိုက်သွား ဖေဖေကစွံတယ်ပြောတဲ့ အထိ ဘာမှ ပြန်မပြောပေမယ့် သမီးတွေက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မစွံတဲ့ ဖေဖေထက် စွံတဲ့ အဖေဆိုတာဂုဏ်ယူစရာလို့ 
ပြောမှိတော့ အေးအေးညည်း တို့ခလေးတွေ လည်းအဲ့လို ပြောလာမှ ညည်းတို့ ပြုံးနေလိုက်တဲ့။
အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ ဂျပန်ကို လာရတဲ့ အချိန်တွေဆို မေမေတစ်ယောက် သမီးကြီး အလုပ်ကိစ္စတွေ စကားပြောတာအဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့ ဆုတောင်းသံက တစ်အိမ်သားလုံးကြားတယ်။
ပြန်ရောက်ပီဆိုတာနဲ့ ကျွန်မစားမယ့်အစားအသောက်ကို ချိုင့်ကြီးချို င့်ငယ်နဲ့ အိမ်ကိုပို့ပေး သမီးကြီးမရှိတဲ့
အချိန် မေမေတို့ အတော် အလုပ်ရှုပ်သက်သာတယ်သိလားဆိုပီး ပြုံးတုံးတုံး
ညည်းအေမြန်လိုက်တာတဲ့ ကျွန်မနိုင်ငံခြားထွက်တိုင်း အငယ်မလေးက အိမ်လာစောင့်ပေးတော့ သူ သမီးငယ်နဲ့  နေရတဲ့အချိန်ကို သူခမျာ စိတ်ချမ်းသာတယ်လေ။ မေမေမွေးတာ နည်းသွားတယ်လို့ ပြောတိုင်းစိတ်မကောင်းဘူး။ တစ်ယောက်မှ သူ့ အနားမှာမရှိကြဘူးလေ ။ ခုအငယ်မကတော့ မကြီးရေ ညီမလေးတော့ ရန်ကုန်ပြန်နေတော့မယ် မိဘကိုယ် ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပြုစုချင်တယ်တဲ့။
မေမေက သူကိုယ်တိုင်ကျွန်မကို ထမင်းခူးခတ်ကျွေးတတ်တယ်။ ကျွန်မကလည်း မေမေခြေသည်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ညှပ်ပေးပြီး ဆေးဆိုးပေးလေ့ရှိတယ်။ မေမေက ခြေသည်းဆိုးခြင်ရင် ကျွန်မကိုစောင့်တတ်တယ်။ ခု ၅၇ ဆိုတဲ့မေမေက အစားအသောက်ကို အချို အအီ အဆိမ့် တတ်စာ ဆို ရှောင်ခဲ့တယ။် ရောဂါဖြစ်လာတဲ့ လူတွေကို မြင်ပြီး အဲ့ လို ခံနေရတာ ပိုက်ဆံလည်းကုန် လူလည်း စိတ်ညစ်ဆို ပီး အစားအသောက်ကို သတိထားတော့ သွေးတိုး ဆီးချို နှလုံးဘာမှ မ၇ှိဘူး။ တခြားဘာရောဂါမှ မဖြစ်ပါစေ
နဲ့ လို့ ဆုတောင်းပေးနေရတာပါပဲ။ မေမေဟာ ဘယ်အချိန်ဘယ်သွားသွား မြန်မာအကျီရင်ဖုံးလက်၇ှည်ကို သိပ်ကြိုက်တယ်။ ညီမလေးက အဲ့ ဒီ့အမွေ ကို မေမေ့ဆီကရတယ်။ သမီးတွေ မေမေဆိုတော့တည်ငြိမ်စွာ ၀တ်စားရမယ်လေတဲ့။ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက မေမေက အိမ်မှာ အဖော်မခေါ်ဘူး။ နွေပိတ်ရက်ဆိုရင် ပိုဆိုးတယ်။ သမီးနှစ်ယောက်မွေးထားပီး အိမ်မှာအကူခေါ်ရမှာ မေမေရှက်တယ်တဲ့။လုပ်ကြညီမအနှစ်ယောက်ဆိုပီး ..ကောင်မလေးတွေ ကိုတောပြန်ခိုင်းတယ်။ ကောင်မလေးတွေက လည်းလစာအပြည့်နဲ့ တောပြန်ရတော့
ကလို့ ပြန်ကြတယ်။ အ၀တ်ကိုပဲလူငှားလျှော်တယ်။ အငယ်မက မေမေ့ဆီက အချက်အပြုတ်အကုန်
ရလိုက်သလို ကျွန်မကတော့ မေမေ့ဆီက အိမ်သန့် ရှင်းရေး တို့ဇာထိုးပန်းထိုးပန်းပင်စိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ ၀ါသနာတွေ အကုန်တူတယ်။
ငယ်ငယ်က ကျွန်မတို့ အတွင်းခံတွေ ကောင်မလေးတွေ လျှော်မယ့်တောင်းထဲ သွားထည့်တာ စိတ်ဆိုးလိုက်တာ။
လုပ်ပေးတဲ့ သူရှိတိုင်းဘာမှ မလုပ်ပဲ အဲ့ လောက်အပိုးမကျိုးကြရင် လာစမ်း တိုက်ပေတော့ အိမ်သာဆိုပီး အပြစ်လည်းပေးသေးတာ။
ခုဒီတစ်ခေါက်ကျောင်းပြန်တတ်မယ်ဆိုတော့ မေမေရယ်လေ ကျွန်မစိတ်အားတစ်အားထက်သန်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စဆိုတာကိုနားလည် နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကဲ..သမီးကြီးလုပ်ငန်းခွင်ရောက်ပြီးသား လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျောင်းသားဘ၀ကိုပြန်ရဖို့ ဆိုတာရတောင့်ရခဲတဲ့ အခွင့်အရေး ဒီတော့ဟိုးအရင် အပျိုဘ၀ ကျောင်းသွားတတ်တုန်းက လို ပဲ ဘာမှ စိတ်ထဲမှာ မထားပဲ စိတ်အေးချမ်းသာစွာ ပညာသင်ပါလေလို့ လည်း ဆိုရော ဘာပြောကောင်းမလည်း ကျွန်မ ကိုကို က အမေရယ် အမေစကားထဲက ဟိုးအရင် အပျိုဘ၀ က ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးပြန်ရုတ်သိမ်းပေးပါလား ဆိုတော့ အေးဟုတ်သားပဲတဲ့ …
ကျွန်မမွေးနေ့ တိုင်း မေမေက နှင်းဆီပင်စိုက်ပေးတတ်တယ်။
ညွန်းစာဖွဲ့ လို့ မမှီနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာထဲက ညတုန်းက တောင်ရောက်မြောက်ရောက် မေမေ့အကြောင်းစဉ်းစားမှိတဲ့အရာလေးကို ပြန်ရေးချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မေမေကျန်းမာပါစေ. မိခင်တိုင်း စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ………..
မှတ်ချက် . ကျွန်မမိသားစုအကြောင်းကို ဘလော့ပို့ စ်အနေနဲ့ ရေးလိုက်တယ်ဆိုတာထက် ကျွန်မဒိုင်ယာရီမှာ မှတ်တမ်းတင်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ အမေနဲ့ ဝေးနေသူတွေ အတွက် တူညီစွာ ခံစားရင်း..
Posted by ကြည်ကြည် at 9:43 AM6comments:
Posted by ကြည်ကြည် at 8:24 AM5comments: